अचम्मको घटना : बिरामीको पेटबाट निकालियो ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू ! - OneZero News
अचम्मको घटना : बिरामीको पेटबाट निकालियो ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू !
काठमाडौं / हाम्रा वरिपरी हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । तपाईं हामी कतिले समाचार सुनेका छौं, डाक्टरको लापरबाहीले कोही बिरामीको पेटको अपरेशन गर्दा पेटभित्रै कहिले कैंची, त कहिले कपडाको टुक्रा छोडिएको हुन्छ । तर आज हामी त्यो भन्दा फरक सुनाउँन गइहरका छौं ।
भएको के भने बिरामीको पेटबाट ८ वटा चम्चा, २ वटा स्क्रुड्राइभर, २ वटा टुथब्रस र १ वटा चक्कू निकालिए पछि अहिले सबै आश्चर्यमा छन् । ढुक्क हुनुहोस् यो घटना नेपालको भने होईन् । यो घटना घटेको छ भारतको हिमालञ्चल प्रदेशमा जसले तपाईंलाई अचम्मित तुल्याउँछ ।
यो घटनाले विशव नै अहिले अच्चममा परेको छ । मानव इतिहासलाई चुनौती दिने यो घटना भएको छ । सामान्यतया कुनै मानिसले ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू खाना सक्ने कुरा सामान्य होईन । एजेन्सी